ကိုလူထွေး...: ကွင်းဖူးသူများ မကြည့်ရ
အားလုံးသိပြီး ကြတဲ့အတိုင်း မချိုသင်း ၊ မအယ်ဇီ နဲ့ ကိုလူထွေး တို့ ဘလော့ဂါသုံးဦး ဆုံတဲ့အခါ... အမှတ်တရ ကာတွန်းသရုပ်ဖော် တခုလုပ်မယ်လို့ ဟိုးတချိန်တုန်းက တိုင်ပင် ကြုံးဝါး စကားထားခဲ့ ကြဖူးပါတယ်။
ဟေး.......ပထမဆုံးလာမန့်ခွင့်ရပြီ အဟိ။ အင်း ကွင်းဖူးသူ လာမကြည့်ရဆိုလို့ လာကြည့်တာ ဟွန့်
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ )
လုပ်လိုက်ရင်အထူးအစမ်းကြီးဘဲ-ငြိမ်နေပြီဆို တစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုဘဲလို့ တွက်ထားတာ-ဟေးးးးးးးးးးးးးးးးးးလူထွေးရေ - - - ခေါင်းခွဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုနေ-
အဟဟဟပျောက်နေတာကြာပြီပေါ်လာတော့လဲ ပျော်စရာတွေနဲ့ဟင်း.. ကွင်းဖူးသူများ မကြည့်ရဆိုလို့အိုး ဘာဖြစ်လဲ ကြည့်မှာဘဲ ... ဒီကလည်း ကွင်းဖူးတယ်ရှင့်..ဘောလုံးကွင်းတိုင်း မရောက်မရှိမို့ သူငယ်ချင်းတွေက နံမည်ပေးထားတာလေ..လေဒီ ဘောလုံးကွင်းလို့း))
အဲဒီတော့... blogger သုံးယောက် ဆုံကြတယ် ဆိုပါတော့လေ..... ကံကောင်းလိုက်ကြတာ.... မချိုသင်း ခရီးသွားနေသည် ဆိုတာ ဒါကြောင့်ကိုးးးးး ... :D :P
မြန်မာစာမေဂျာကွင်းလေးကြိုက်တယ် ။ သွားလေးတစ်ချောင်းနဲ့ မျက်လုံးလေးပုတ်ခတ် ပုတ်ခတ်နဲ.၊ ကျောက်ကွင်းကတော.အချောဆုံးပဲ။ဒီသီချင်းလေးကို့အရမ်းကြိုက်တယ် ။ ပျော်စရာ ချစ်စရာသီချင်းလေး ......ခဏလေးကျောင်းတက်ခဲ.ရချိန်လေးတွေကိုလဲ ကြည်ကြည်နူးနူးပြန်လွမ်းစေတယ် ။ သီချင်းကားလေးအတွက် ကျေးဇူးအစ်ကို ၊မမိုးချို ၊ မမအယ် ....။amayarko,
ကိုလူထွေးရော မမမိုးချို မအယ် အားလုံးတော်လိုက်တာ... ရီရတယ်... စိန်ပန်းပင်ကို အခိုက်ဆုံးပဲ... label လေးတောင် တပ်လိုက်သေးတယ်...:P
စစချင်း စာတမ်းထိုးတာ နည်းနည်းမြန်တာလေးကလွဲလို့ အားလုံးကောင်းတယ်... ကာတွန်းပုံလေးတွေက လည်း ချစ်စရာကောင်းတယ် mie nge
မကွင်းဖူးလို့ ကြည့်သွားပါ ကြောင်း..း)..ချိုသင်းနဲ့ မအယ်လေး နဲ့က ကွင်း တွေ ကိုး..း)) ..
များတို့က မကွင်းဖူးလို့ လာကြည့်သွားတယ်။ မြန်မာစာကွင်းရဲ့စာကို အကြိုက်ဆုံးပဲ ... "မြွေပွေးကိုက် " ဆိုတော့ ရယ်လိုက်ရတာ ... ပျောက်နေတာကြာပေါ့နော် ...
ဦးလူထွေးကြီးးးး ပျောက်မယ့်ပျောက်တော့လဲ အကြာကြီးပဲပြန်လာတော့လဲ ကာတွန်းလက်ရာ ပျော်စရာလေးနဲ့ ပေါ့လေ ... ။ ဥပုသ်စောင့်မှာမို့ လောလောဆယ်မကြည့်သေးဘူး။ နောက်နေ့မှ ကြည့်တော့မယ်။ကွင်းဖူးဘူးဆိုတော့ ဖြစ်တယ်မဟုတ်လား ...
ကိုလူထွေးရေ.. မိုက်ရယ်ဗျာ... အဲလို အတတ်ပညာလေးတွေ တတ်ချင်ရယ်...ခင်မင်တဲ့နေ၀သန်
ကြည့်လို့မရသေးလို့ နောက်မှထပ်လာတော့မယ် ..မရယ်ရသေးလို့ မကျေနပ်ဖူး. ပျောက်နေတာကြာပီမို့ .. မဒမ်လူထွေးရော နေကောင်းပါရဲ့လားလို့..
အော..သူတို့ ၃ ယောက် တွေ့ ကြ သည်ပေါ့လေ..။ ယူရို ဖလင် မှာ ၀င်ပြိုင်မဲ့..ကိုလူထွေးး ရဲ့... ကာတွန်းကားလေး ကိုတော့..သဘောကျသွားပြီ...။ ဖဘ မှာ..ယူရှဲ အုံးမယ်..း)
ဝေးးးးးးးးးးးးးးးးးကလူထွင်းကြီးပြန်လာပြီဟေ့ဝမ်းသာစွာ ခုန်ပေါက်ကြိုဆိုပါတယ်ဗျိုး:) :D
အကြာကြီးပျောက်ထားတာဆိုတော့ ဒီပို့စ်တခုထဲနဲ့မရဘူးနော် ..... ဒီကြားထဲ ကုန်ကြမ်းတွေ အများကြီး ရထားတယ်မဟုတ်လား .... ဆက်တိုက် ရေးပါနော် ကိုလူထွေး..
မိုက်တယ်အစ်ကို... ကျောင်းတုံးက ကွင်းတွေကို သတိရသွားတယ် ။
ဆိုရရင်ကြွားတယ်ပေါ့လေ ဟုတ်လား ၃ ယောက်တွေ့ကြတယ်လို့ ဟွင့် မနာလိုဘူး အားကျတယ် ဗြဲ
မိုက်တယ်ဗျ....။မြန်မာစာကွင်းလေးကတော့ ကွင်းတွေအားလုံးရဲ့ ကွင်းလို့ ပြောရမယ်..။
ကာတွန်း ပုံလေးတွေထဲက ကောင်မလေးတွေကတော့ မအယ်နဲ့ ၊ မချိုသင်း မဖြစ်နိုင်ဘူး ပုံလေးတွေက အရမ်းကြည့်ကောင်းနေလို့ပါ ( ဟိ ဟိ ဟိ ဟိ ဟိ ) ကောင်လေးပုံကတော့ ကလူထွေးဖြစ်နိုင်တယ် ( ဟတ် ဟတ် ဟတ် )ke
မကွင်းဖူးတော့ လာကြည့်တယ်..ဟဲဟဲ ဂွတ်ထ..ဦးဦးလူထွေးတို့ တော်ကြ၏..။
တခါမှမကွင်းဖူးပါ...ဒါ့ကြောင့်...တခါ မကကြည့်သွားပါတယ်...ပန်းချီ ကာတွန်းဆိုရင်ကြိုက်လို့....
ကိုလူထွေးရေသတိရလို့ သီချင်းတွေ လာနားထောင်ပါတယ်။ စာမရေးချင်တောင် ခုလို သီချင်းလေးတွေ လုပ်ပါအုံး။ အမြဲသတိရနေတယ်။ မဒမ့်ကိုလဲ အမြဲအောက်မေ့လျက်ပါ။ အတူ လာလည်ကြပါအုံးနော်။ ကိုလူထွေးတို့ဆီကို လာလည်တုန်းက လိုလေးသေးမရှိ ဂရုစိုက်ခဲ့တာတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်မိတယ်။
အရမ်းအရမ်းကို creative ဖြစ်ပါတယ် ကိုလူထွေးကြီး။ I simply loved it!
ကွင်းဖူးပါတယ်ဗျာ... ခြင်ကိုက်တုန်းက ထုံးနဲ့.... ဟိဟိ
ကျန်းမာပါစေမင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါခင်ဗျာ-စီဘောက်စ်ဖြုတ်ထားလို့ကွန်မန့်မှာလာရေးလိုက်တာပါ။နှစ်သစ်မှာရေအေးအေးကလေးလာလောင်းသွားပါတယ်-အေးချမ်းသာယာရှိပါစေ----:)
မြန်မာနှစ်သစ်မှာ အစစအရာရာတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေ၊ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။ဒီကာတွန်းလေးကို ခုမှကြည့်ဖြစ်တာ၊ တော်လိုက်တာ၊flash နဲ့ လုပ်တာလား မြန်မာစာကွင်းလေးက ချောတယ်၊ မျက်လုံးလေး ပေကလပ် ပေကလပ်နဲ့ သဘောကျတယ်၊ကွင်းရဲ့ပြန်စာကိုကြိုက်တယ်၊ အစုံပဲ :D စိန်ပန်းပင်လည်းကြိုက်တယ်၊ ကာတွန်းရုပ်လေးတွေ သိပ်လှတယ်၊ ၂၀၁၀ က တင်ထားတာပဲ၊ သဘောကျလွန်းလို့ နောက်ကျနေလည်း မှတ်ချက်လေးတော့ ရေးသွားပါတယ်။Happy Myanmar New Year
အစ်ကိုလူထွေးရေ YouTube မှာ ဟိုနှိုက်ဒီနှိုက် လုပ်ရင်းနဲ့ ရောက်လာတာပါ။ အရိုး ရဲ့ သီချင်းတွေကို music cartoon video သဘောကျလွန်းလို့ fb မှာ share ပါရစေလို့ ခွင့်တောင်းရင်း (ပြီးတောင်ပြီးသွားပါပြီ share လို့) စာပေလက်ရာတွေ အများကြီး ထပ်ရလို့ ကျေးဇူးထပ်တင်ရပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ပါဦးမယ်။
မင်္ဂလာပါ ကိုလူထွေးဘယ်ကိုရောက်နေသလဲဗျာ-ဘယ်မှာမှမတွေ့ တော့ဘူးနော်-ခြေယာဖျောက်ကောင်းလိုက်တာဗျာ-ကျနော်ကတော့သတိရနေတုံးပါ။လေးစားစွာဖြင့်ဂျစ်တူး(မုံရွာ)
ဘယ်ရောက်နေတုန်း မွားစေးအကီးကြိုရေ...တကယ်ကိုခြေရာဖျောက်ကောင်းလိုက်တာ။ မွားစေးညမီတို့ကတော့ သတိရနေပါတယ်။
ငယ်အမည်မှာ မောင်လူထွေး။ သူငယ်ချင်းများက လူထွင်းဟု ခေါ်ကြသည်။
© copyright 2009-10 by KoLuuHtwe
၃၀ ရက် မတ်လ ၂၀၀၉ တွင် စတင်သည်